Outstanding Student (Lu-Ye Chun လူရည်ချွန်) Project | Dr Ko Ko Gyi's Blog
လူရည်ချွန် အပန်းဖြေစခန်းများကို ပုဂံ၊ အင်းလေးနှင့် ငွေဆောင်ကမ်းခြေတို့၌ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် “လူရည်ချွန် အကြောင်း မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အမေးအဖြေ”
ဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ အောင်မြင် အကျိုးပြုခဲ့တဲ့လူရည်ချွန်စီမံကိန်း U Win Tin, BSPP CEC and I (me)
LYC Dr. Thin Thin Linn and I နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးရှိသော လုပ်ငန်းများကို စုပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လူရည်ချွန်ဟောင်းများ ပြန်လည်စုစည်း
Luyechun Songs Inle Khaungdaing and Ngapali Shwe War Chaing Luyechun camps LYC Dr. Daw Nwe Nwe Tint and I (2) လူရည်ချွန်ကလပ် လူရည်ချွန် သူငယ်ချင်းဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲ (၁.၉.၂၀၁၃) လူရည်ချွန် နှစ် ၅၀ ပြည့် ရွှေရတု 1964-1988 လူရည်ချွန်တံဆိပ် ရှင်းလင်းဖေါ်ပြချက် သမိုင်းထဲက လူရည်ချွန်များ ၁၉၆၈ လူရည်ချွန်စီမံကိန်း ဗဟိုကော်မတီ လူရည်ချွန် လူရည်ချွန် ၀င်းအောင် >အမှတ်တရ Luyechuns Outstanding Students from No9SHS/BEHS (St. Peter’s) 1966 – 1988 1972 IMM luyechuns (newspaper clip)
ဖွတ်ကလေး၊ အီကြာအော်နှင့် လူရည်အချွန်များအကြောင်း 2013 New Generation LYC List ဖွတ်ကလေး၊ ခိုနီနှင့် လူရည်ချွန် စီမံကိန်းအသစ် LYC Dr. Tint Tint Kyi’s interview in Education Digest Myanmar schools to reintroduce outstanding student programme
ဖွတ်ကလေးနှင့် အီကြာအော် လူရည်ချွန်စိတ်မွေးကြည့်ခြင်း One LYC movie
Moe Ma Ka: လူရည်ချွန် List of Outstanding Students from St. Peter’s No.9SHS BEHS Dr. Tin Myo Win (NLD Daw Suu’s Physician) LYCs with late U Thaung Htut and U Ba Thaw Head Master U Ba Thaw and I 1971-72 IMM luyechun Outstanding Students My Lu Ye Chun Friend Dr. Thin Thin Lynn Number of Outstanding Students in 25 years Inlay Khaung Taing Luyechun Camp (now Hupin Hotel, Inlay) Education Digest interview of Dr. Than Win in 10.10.13 issue Interview with Dr. Nwe Nwe Tin in Education Digest Journal ဒေါ်နွဲ့ နွဲ့ တင်ကို စမ်းရေ( edu ) က တွေ့ ဆုံမေးမြန်း
“လူရည်ချွန်လူရည်မွန်တို့၏အပန်းဖြေငပလီ၊စခန်းနွေငပလီ“ ခွဲခွါခြင်းသည် တဒင်္ဂ (လူရည်ချွန်) Luyechun Outstanding Student list My last time or 5th. year LYC award year-book cover picture ပေါင်းစု ဒီနွေ သားကောင်းသမီးမွန် တို့လူရည်ချွန်တွေ ဆုံးပါးသွားရှာပြီဖြစ်သော လူရည်ချွန်အချို လူရည်ချွန် လူမှုရေး ကွန်ယက်( facebook ) လူရည်ချွန် မှသည် ရွှေရတုပွဲ ယာယီအမှုဆောင်အဖွဲ့Luyechun (1962-88) Group မမေ့လေနဲ့ ၆၅ ငပလီ LYC record collections list Independence Day massage from my Australian Rohingya LYC friend My icon Dr Nyi Nyi at Luyechun meeting LYC Vice President at (LYC) Outstanding Student Dinner ရွှေရတုအကြို လူရည်ချွန်များ တွေ့ဆုံ လူရည်ချွန် အမှတ်တရများ Open letter to my beloved Luyechun friend, EMG boss Dr. Than Htut Aung News reports of Luyechun reunion dinner attended by LYC Vice President
Luyechun or Outstanding Students Association record book front and back cover pictures My old picture sent from my sister
“လူငယ်လောက၊ တို့ လမ်းပြ မိုးဝ ဓူဝံ လူရည်ချွန်” အပိုင်း (၃) “လူငယ်လောက၊ တို့ လမ်းပြ မိုးဝ ဓူဝံ လူရည်ချွန်” အပိုင်း (၄) Great Luyechun Monk Ashin Sandadika အရှင်ဆန္ဒာဓိက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း စောမောင်၏ သမီး ကေသီစောက လူရည်ချွန်ပါ
‘လူရည်ချွန်’ MRTV 1 ‘လူရည်ချွန်’ MRTV 2